Baayar Muuniik preezdaant Saahilwarqiif uffata ispoortii kenne – Fana Broadcasting Corporate
Baayar Muuniik preezdaant Saahilwarqiif uffata ispoortii kenne
Finfinnee, Eebila 9, 2011(FBC)- Kilabiin kubbaa miillaa Jarman; Baayar Muuniik preezdaant Saahilwarq Zawdeef uffata ispoortii kilabichaa irratti maqaa isaanii barreessuun kenneef.
Ministirri Bulchiinsa Baavaariyaan-preezdaant Maarkees Sooderm preezdaant Saahilwarq Zawdeef uffata ispoortii kilabichaa dugda isaa irratti lakkoofsi 1 fi maqaan preezdaantittii irratti barreeffame kennuufiin ibsameera.
Kilabichi akkaadaamii kubbaa miillaa Afrikaarra jalqabaa maqaa isaan waamamu Finfinneetti ni bana jedhameeras.
Wiirtuun leenjii kubbaa miilaa kilabichi Ityoophiyaatti banus wiirtuuwwan kubbaa miilaa biyyoota birootti bane waliin baay’inni isaa 6 gahuu odeeffannoon Waajjira Preezdaantii irraa arganne ni mul’isa.
Kanaan dura kilabichi Ameerikaa, Chaayinaa, Taaylaand, Jaappaanii fi Singaappooritti wiirtuu leenjii kubbaa miilaa baneera.
Ministirri Muummee Dooktar Abiyyi Ahmad daawwannaa hojiif har’a ganama Asmaraa…
Korri Idila Addunyaa qorannoo Oromoo 4ffaa Yunvaarsiiti Jimmaatti taa’amaa jira
Waltajjiin seektera dhuunfaa fi oomishtummaa guddisuu Finfinneetti adeemsifamaa jira
waltajjiin sosochii hojii tajaajila lammummaa ni gaggeeffama
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa gaaffii Sidaamaa mirga hiree…
Injiinar Taakkalaan bakka bu’oota jaarsolii biyyaa…
MM Dr. Abiyi Eemiiriin Kuweet Ityoophiyaa akka daawwataan…
Obbo Shimallis Abdiisaa hooggansi kutannoo qabu dirree…